လေးစားထိူက်တဲ့သူခယ်ချင်းကောင်း | PoemsCorner
သူငယ်ချင်း….မင်းကိုထာဝရခင်မင်ခွင့်ပြုပါ။ သူငယ်ချင်း….ငါအခင်မင်ဆုံးသူကမင်းပါ။ သူငယ်ချင်း….မင်းကိုထာဝရယုံကြည်ခွင့်ပြုပါ။ သူငယ်ချင်း….ငါယုံကြည်ထိုက်သူကမင်းပါ။ သူငယ်ချင်း….ငါ့ကိုထဝရအကြံကောင်းတွေပေးပါ။ သူငယ်ချင်း….မင်းအကြံအငြံကိုထဝရလိုနေသူကငါပါ။ သူငယ်ချင်း….ငါ့ရဲ့စိတ်ကို သိတာမင်း သူငယ်ချင်း….ငါ့ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကို သိသူကမင်း သူငယ်ချင်း….ငါ့ရဲ့မျက်လုံးရဲ့စာကိုဖတ်တတ်သူကမင်း သူငယ်ချင်း….ငါ့ရဲ့အရိပ်အကဲကို နားလည်တာကမင်း သူငယ်ချင်း….ငါစိတ်အားငယ်နေချိန်မှာအားပေးနေတာကမင်း သူငယ်ချင်း….ငါပျဉ်းနေတဲ့အချိန်မှာပျော်အောင်လုပ်ပေးတာကမင်း သူငယ်ချင်း….ငါစိတ်ဓါက်ကျချိန်မှာစိတ်ဓါက်မြင့်တင်ပေးတာကလည်းမင်း ဒါပေမဲ့ ငါမင်းအပေါ်မကောင်းတာတွေကိုမင်းကလှစ်လှူစုအပြစ်မမြင်နိုင်ဘူးနော ငါ့ရဲ့မှားရွှင်းတဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုမင်းကအပြစ်မပြောတဲ့အပြင်ကောင်းတာလေး တွေကိုချီးကျူးရင်း,နောင်အမှားမဖြစ်အောင်ဖျောင်းဖြပေးတယ်နော. ငါက မင်းလိုသူငယ်ချင်းဘေးမှာ.သံကိုတွေ့ရင်ကပ်နေတဲ့ သံလိုက်လေးလိုဖြစ်ချင်တာပါ။ ဘာဘဲပြောပြောမင်းကငါ့ကိုဘုရားပေးတဲ့သူငယ်ချင်းကောင်းပါ…… နောင်ဘဝမှာမင်းလိုသူငယ်ချင်းနဲ့ဆုံပါရစေ.. ကျေးဇူးတင်လျှက်. (Anas Sofee)
In: ကဗျာ Posted By: Anassofee Date: May 29, 2010
သမုဒယကျောင်း – မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း)
Leave comment 12 Comments & 1,156 views
ခေါင်းစဉ်လေး စာလုံးပြင်လိုက်ရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်။
နောက် ဖုရား မဟုတ်ဘူးနော် ဘုရားက သတ်ပုံအမှန်ပါ။
By: မနောဖြူလေး at Jun 15, 2010
By: Anas at Jun 15, 2010
စိတ်မရှိပါနဲ့ ဆရာကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာစာကို မြန်မာတွေတောင် သတ်ပုံမမှန်ဘူးဆိုရင် ဒီပြင်သူတွေ ဘယ်လိုပြောကြမလဲဟင် မကြိုက်ရင် နောက်ကို မပြောတော့ပါဘူးနော်။
By: မနောဖြူလေး at Jun 16, 2010
cherry ကတော့အဲဒါကိုဆရာလုပ်တယ်လို့မထင်ပါဘူး။ သူများတွေကသတ်ပုံမှားတာဖတ်ပြီးကဲ့ရဲ့နေမှာဆိုလို. ma naw phyu lay ကစေတနာနဲ့ပြောတယ်လို့ပဲထင်တယ်။သူငယ်ချင်းတွေပဲအကောင်းဘက်ကတွေးတာပဲကောင်းပါတယ်နော်
By: cherry at Jun 26, 2010
ဆရာလုပ်လို့လေးစားပြီးဆရာခေါ်တာ အပြစ်ရှိလာ၊ ဂုဏ်ယူရမဲ့အစားဘာလို့စိတ်တိုတာလဲ
By: Anassofee at Jun 26, 2010
ဆရာကြီးခေါ်တယ်ဆိုတာ လေးစားလို့ခေါ်တာရှိသလို ငေါ့ပြီး အရွဲ့တိုက်ခေါ်တဲ့လေသံလည်းရှိပါသေးတယ်။ ဘယ်သူမဆို သိပ်မကြိုက်ကြပါဘူး။ မနောက ရှည်မိတာလည်းပါတယ်လေ။ အမှန်ဖတ်နေကြဆိုတော့ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံမှားနေရင် ကိုယ်ရေးတဲ့စာက အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးထွက်ပြီး လာဖတ်တဲ့သူမလေးစားမှာစိုးရိမ်လို့ပါ။ မနောကတော့ ဝေဖန်တာ အရမ်းသဘောကျတယ်။ ဝေဖန်မှုရှိမှ တိုးတက်မှုရှိမယ်လို့ ကိုယ့်ဘာသာသိနေလို့ပါ နောက်တစ်ချက်က လာထဲက ဖတ်ချင်လို့လာတာလေ။ ဖတ်တော့ စာလုံးပေါင်းမှားနေတယ်ဆိုရင် စာက ပေါ့သွားရောရှင့် စာရေးသူနဲ့ Anassofee ဘာတော်လဲမပြောတတ်ဘူး။ ရေးထားတဲ့စာကို ဖတ်ကြည့်ရင် သဘောပေါက်မှာပါ။ စာပေရေးသားသူအချင်းချင်း ခင်မင်မှုတိုးတက်အောင် ပြောမိတာပါနော်။ ချယ်ရီကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ လာရောက်ဝေဖန်အကြံဥာဏ်ပေးပါဦးလို့ ထပ်ဆင့်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
By: မနောဖြူလေး at Jun 27, 2010
အခေါ်မခံရအောင်ကျိုးစားပြီးနေပေါ့ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မင်းဆရအခေါ်ခံရတာမကြိုက်မှန်းအခြားလူမှမသိတာ၊ ဘယ်သူမှဆရာမခေါ်အောင်ကိုယ့်ပါနဲ့ရှောင်ကျင်ပေ့ါ
By: Anas at Jun 27, 2010
လေးစားထိုက်တဲ့သူငယ်ချင်းကောင်းက တော်တော်ကောင်းပါတယ် ……..နောက်လည်း ဖတ်ခွင့်ပြုပါ
By: စမ်းချောင်းလေး at Sep 24, 2010
By: bobon010 at Dec 30, 2010
နင်ရေးတဲ့ comment က သတ်ပုံမှန်ရဲ့လာ?
By: anas at Dec 31, 2010
နာ ဦးလေလည် ဒီရောက်နေတာကို ခုမှသိတော့တယ်…
By: songmoezin at Aug 2, 2011
perfect poem …. i like it so much..
By: cynthia at Jun 2, 2012